Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Mexico » Ny fizahan-tany any Mexico dia nilatsaka 73% tamin'ny taona 2020
Governemanta iraisam-pirenena maro no saika tsy afaka niditra tao amin'ny sisintanin'izy ireo na nanasarotra izany farafaharatsiny.
Ny fanarenana vetivety an'i Mexico dia miankina betsaka amin'ny tsenan'ny fizahantany ao anatiny
Mampiseho ny indostria fa hiverina amin'ny 2022 ny dia an-trano any Mexico
Mety mila mieritreritra ny tompon'andraikitra raha azo antoka ny fampiroboroboana ny fizahan-tany eto an-toerana atsy ho atsy satria mitohy hatrany ny areti-mandringana any Mexico
Ny areti-mandringana COVID-19 dia nisy fiatraikany ratsy tamin'ny fitsangatsanganana ivelany any Meksika, ary nahatratra 73% ny isan'ireo dia. Ity tarehimarika ity dia ny fianjerana faharoa farany ambony indrindra any Amerika, aorian'ny Peru (76%). Na eo aza ny sidina ara-barotra miasa mandritra ny taona amin'ny fahaizana voafetra, firenena maro no tsy nety nisokatra ny sisin-taniny Meksikany aretin'ny COVID-19 avo sy ny tahan'ny fahafatesany. Farany, nanjary fianjerana mahatsiravina tamin'ny fitsangatsanganana ivelany izay tsy ho sitrana raha tsy amin'ny 2024.
Betsaka ny tompon'andraikitra amin'ny governemanta vahiny no iharan'ny tsindry handraisana fanapahan-kevitra tsara raha ny dia no jerena. Mampalahelo fa mihevitra izy ireo fa ireo firenena manana taha mararin'ny aretina sy maty dia atahorana ho voaro amin'ny toeran-kafa. Vokatr'izany, governemanta iraisampirenena maro no nanao izay tsy ahafahan'ny Meksikana miditra amin'ny sisintaniny na farafaharatsiny nanao izay sarotra indrindra.
Ny fanarenana vetivety an'i Mexico dia miankina betsaka amin'ny tsenan'ny fizahantany ao anatiny. Toy ny faritra maro hafa, ny vinavinan'ny indostria dia mampiseho ny dia an-trano dia ho sitrana amin'ny taona 2022.
Na dia tsy azo antoka aza ny tarehimarika, ny firongatry ny famandrihana staycation dia fironana manerantany. Ny fanalefahana ny fameperana ny dia dia miadana kokoa noho ny nandrasana, ary ny tahotra ara-pahasalamana sy fiarovana dia antony lehibe manosika ny fizahantany ao an-toerana
Be ny tsenan'ny fizahan-tany any Mexico. Tamin'ny taona 2019 dia nisy 275 tapitrisa ny dia an-trano. Mampalahelo fa nilatsaka 55% io isa io tamin'ny taona 2020. Vokatr'izany dia miatrika fotoana sarotra ny governemanta Mexico. Manome asa sy fidiram-bola ho an'ny orinasa maro ny sehatry ny fizahan-tany, saingy mety mila dinihin'ireo tompon'andraikitra raha azo antoka ny fampiroboroboana ny fizahan-tany ao anatiny ato ho ato satria mbola mitohy hatrany ny areti-mandringana any Mexico.